Ihe ubi nduku na Russia nwere ike itolite site na 6-7% - Magazin Poteto System
Owuwe ihe ubi nduku na Russia nwere ike itolite site na 6-7%
Owuwe ihe ubi nduku na Russian Federation na 2022 nwere ike itolite site na 6-7% ma e jiri ya tụnyere ọnụ ọgụgụ maka 2021. A kọọrọ nke a na portal "Na-akọwa.rf" Alexey Krasilnikov, onye isi nchịkwa nke Potato Union, na-akọ TASS.
"N'afọ gara aga, na mpaghara nke hectare 280, anyị nwetara ihe dị ka tọn 6,8-7 nde poteto. N'afọ a, dịka amụma anyị siri kwuo, ekwesịrị iweta ihe ọkụkụ dị nde 7,2-7,5," ka o kwuru. Dị ka ekwuru na ozi nke portal, a na-anakọta ihe dị ka otu ego na ala ụlọ.
Krasilnikov kwuru na n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, site n'enyemaka nke Ministry of Agriculture na gọọmenti, ndị ọrụ ugbo amụbawo ọnụ ọgụgụ nke poteto na akwụkwọ nri nke oge a. Ha na-enye gị ohere ịbawanye ndụ nchekwa, na-asọpụrụ àgwà ngwaahịa.
“Mba ahụ chọrọ ton nduku nde 12-15 kwa afọ maka nri. Na mgbakwunye, a ka nwere mkpa mkpụrụ nduku. Ihe ndị anyị na-ebubata abụghị ihe karịrị ọkara nde tọn. Anyị bụ obodo kacha nwee ọganihu n'ihe gbasara poteto ma nọrọ n'ọnọdụ nke atọ n'ụwa n'ihe gbasara oke owuwe ihe ubi, "Krasilnikov kọwara.
Tags: Otu ndukuLPHMinistry of Agricultureụlọ ahịa nriihe ubi nduku
Ke Stavropol Territory, ha na-elele mkpụrụ anụ ụlọ nduku iche
Rosselkhoznadzor nwere nzukọ na German Union of Breeders na ndị na-emepụta mkpụrụ nduku